हाेसियार ! हराएका मध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिका भेटिँदैनन् | mulkhabar.com
हाेसियार ! हराएका मध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिका भेटिँदैनन्
October 27, 2018 | 6:30 am 127 Hits
काठमाडौँ, कात्तिक ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा हराएका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै फेला परे । चौसट्ठी प्रतिशतको अवस्था अज्ञात नै छ । गएको वर्ष हराएकामध्ये ६० प्रतिशत बालबालिका अझै बेखबर छन् ।
पछिल्लो तीन महीनामा हराएकामध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिकाको अवस्था अज्ञात रहेको बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णबहादुर राजभण्डारी बताउनुहुन्छ । “फेला परेर पनि अभिभावकले खबर नगर्ने अवस्था छ, राजभण्डारीले भन्नुभयो, तर धेरैजसो भेटिएका हुन्नन् ।”
देशभर साउन, भदौ, असोज महीनामा ८७६ बालबालिका हराएकामध्ये अहिलेसम्म ३१६ फेलापरे । अझै ५६० बालबालिका कहाँ छन् पत्तो छैन । प्रदेश नं ३ बाट सबैभन्दा बढी १७२ बालबालिका हराएको तथ्याङ्क छ जसमा उपत्यकाका मात्रै ६५ छन् । प्रदेश नं १ बाट १३७, २ बाट १४२, ४ बाट ९९, ५ बाट १४५, ६ बाट ९१ र ७ बाट ८० बालबालिका हराएका छन् । हराएकामध्ये सबैभन्दा बढी ५९७ जना बालिका छन् ।
कम उमेरका बालक बढी हराएका पाइएको छ । उमेर बढ्दै जाँदा बालिका बढी हराउनेक्रम रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजभण्डारी बताउनुहुन्छ । सबै प्रदेशबाट भेटिएका बालबालिकामध्ये २०९ बालिका र १०७ बालक छन् । खोजतलास केन्द्रका अनुसार तीन महीनामा नेपालभर ९० बालक र ५४ बालिका बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका थिए । उनीहरुमध्ये अहिलेसम्म ७७ लाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको र ६६ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा राखिएको छ ।
केन्द्रका प्रहरी सहायक निरीक्षक नारायण केसी बालबालिका फेलापर्नेक्रम न्यून छ भन्नुहुन्छ । मुख्यतः आर्थिक अवस्था कमजोर, पारिवारिक विचलन, मदिरा सेवन, घरेलु हिंसा, आमा अर्कैसँग गएपछिको समस्या, अशिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारी लगायतका कारणले बालबालिका जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यस्ता कारणमध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका परिवारका बालबालिका बढी जोखिममा रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । कतिपय शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।
आव २०७४÷७५ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा दुई हजार ३३० बालबालिका हराए जसमा एक हजार ४०७ बालिका र ९२३ बालक छन् । तीमध्ये एक हजार १७ जना फेला परे । उक्त तथ्याङ्कले बालिका बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । एक वर्षमा प्रदेश नं १ बाट २४५, २ बाट २८७, ३ बाट ७०२ (उपत्यकामा २८३), ४ बाट २७५, ५ बाट ३४१, ६ बाट २१० र ७ बाट २७० बालबालिका हराएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ४४२ जना बालबालिका बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका थिए । सबैभन्दा बढी उपत्यकामा मात्रै ३०८ बालबालिका बेवारिसे फेला परे ।
केन्द्रले दशैँको अवधिमा १२ जना बालबालिका बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेकोमा दुई बालिका र १० बालक थिए । त्यसमध्ये दुईलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको थियो । अन्य १० को भने परिवार पत्ता लाग्न नसकेकाले संरक्षण गृहमा राखिएको छ । राससबाट